विश्वभरीमा केबल एक व्यक्तिले मात्रै किन्न पाउने बाइक ! «
शानदार बाइक बनाउने इटालीको एमभी अगस्टाले एक यस्तो मोटरसाइकल ल्याएको छ, जुन व्यापक मन छुने खालको छ । यो बाइकको विशेषता के छ भने यो केबल एउटा मात्रै उत्पादन भएको छ । अर्थात यो बाइक विश्वभरीमा एक व्यक्तिले मात्रै किन्न पाउने छ । यो मोटरसाइकल कम्पनीको बु्रटाले १००० आरआर सुपर– नेकेड बाइकको अल्ट्रा– लिमिटेड एडिशन भर्सन हो । यसलाई एमभी अगस्टा ब्रुटाले १००० आरआर एमएल नाम दिइएको छ । के छ त यो बाइकको विशेषता ?
ब्रुटाले १००० आरआर एमएल मोटरसाइकलको लुक स्ट्यान्डर्ड ब्रुटाले १००० जस्तै छ । यो अल्ट्रा लिमिटेड एडिशन बाइक ब्लू तथा ह्वाइट कम्बिनेशनका साथ ट्राइकर पेन्ट स्कीममा आएको छ । बाइकको फ्रेम, आल्मुनियम भिल्ज तथा स्वीङआर्ममा सुनौलो रंग ललाइएको छ । यसको नाममा समावेश गरिएको एमएल अक्षरको सम्बन्ध यो खास मोटरसाइलको एकल मालिकको नामबाट हो । प्राप्त जानकारी अनुसार यो किन्ने मानिसको छोटकरी नाम एमएलबाट आउछ ।
पावर तथा स्पीड
ब्रुटाले १००० आरआर एमएलमा कुनै कुनैपनि मेकानिकल परिवर्तन गरिएको छैन । अर्थात यसको इन्जिन स्ट्यान्डर्ड ब्रुटाले १००० आरआर हो । बाइकमा भएको ९९८ सीसीको इन्जिन, २०५ बीएचपीको पावर तथा ११५ –एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । इन्जिन ६– स्पीड ट्रान्सिमिसनबाट लेस छ । यो अल्ट्रा–एक्सक्लूसिभ मोडल ३०० किलोमीटर प्रति घन्टाको रफ्तार लिन सक्ने दावी कम्पनीले गरेको छ ।
यद्यपी यो बाइकको मूल्यको बारेमा भने केही खुलाइएको छैन । तर पनि यसको मूल्य व्यापक उच्च भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतद्वारा २०२०-२१ को अवधिमा ६ सय १९ करोड मूल्य बराबरको १ लाख ९१ हजार टन केरा निर्यात
भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रमाणित कृषि उत्पादनको निर्यातलाई बढावा दिन फाइबर र खनिजयुक्त ‘जलगाउँ केरा’ दुबई